အပျိုမြှေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂရေး၏ ခန္ဓဗေဒ ပုံမှ အပျိုမြှေး
အပျိုမြှေး (Hymen) ခေါ် မလိင်အင်္ဂါ အမြှေးပါးသည် mucous အမြှေးပါး အခေါက် ဖြစ်ပြီး အပြင်ပိုင်း မအင်္ဂါပေါက်ကို တစိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ကာထားသည်။ အပျိုမြှေးသည် မအင်္ဂါဇာတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာတို့သည် အပျိုမြှေးပေါက်လျှင် အပျိုမစစ် ဟုယူဆကြသော်လည်း အပျိုဟုတ်မဟုတ်မှာ အပျိုမြှေး ဖြင့်ဆုံးဖြတ်၍ မရသလို ကြိုတင် စစ်ဆေးရန်လည်း မဖြစ်နိုင်ပေ။ သံသယ ရှိသော မုဒိန်းမှုများတွင် မှု အပျိုမြှေး ပျက်မပျက် သေချာစွာ စစ်ဆေးနိုင်သော်လည်း အပျိုမြှေး စစ်ချက်တစ်ခုတည်းနှင့်တော့ အထူးသဖြင့် အရွယ် မရောက်သေးလျှင် အတည်မပြုနိုင်ပေ။ အပျိုမြှေး ၏ ပုံစံမှာ ထုံးစံအားဖြင့် လခြမ်းပုံရှိပြီး အခြားပုံ များစွာလည်း ရှိကြသည်။ သားမွေးပြီးနောက် အပျိုမြှေးကို carunculae myrtiformes ခေါ်ပြီး လုံးဝ မရှိပဲလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ 
↑ Emans, S. Jean. "Physical Examination of the Child and Adolescent" (2000) in Evaluation of the Sexually Abused Child: A Medical Textbook and Photographic Atlas, Second edition, Oxford University Press. 62
↑ Perlman၊ Sally E. (2004)။ Clinical protocols in pediatric and adolescent gynecology။ Parthenon။ p. 131။ Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (အကူအညီ)
↑ Emans, S. Jean. "Physical Examination of the Child and Adolescent" (2000) in Evaluation of the Sexually Abused Child: A Medical Textbook and Photographic Atlas, Second edition, Oxford University Press. 63-4
↑ Knight၊ Bernard (1997)။ Simpson's Forensic Medicine (11th edition ed.)။ London: Arnold။ p. 114။ CS1 maint: extra text (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပျိုမြှေး&oldid=299701" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဧပြီ ၂၀၁၆၊ ၁၅:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။